Legacy – Where your legend begin
WELCOME TO LEGACY CORPNEVER START A BUSINESS JUST TO MAKE MONEY. START A BUSINESS TO BUILD A LEGACY.	သတင်းအချက်အလက် အားလုံးကြည့်ရန် အထူးဈေးနှုန်း အားလုံးကြည့်ရန် လှုပ်ရှားမှုများ အားလုံးကြည့်ရန် လုပ်ဆောင်မှုနည်းအသစ်ဖြင့်
ကွန်ယက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တိုးတက်သော လူနေမှုဘဝနှင့် ခိုင်မာသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အားမှန်ကန်စွာတည်ဆောက် နိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကွန်ယက်စီးပွားရေးကိုအသစ်တ ဖန် တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် ပြီးပြည့်စုံသည့် ဘဝအား အစပြုနိုင်ရန်ဖြစ်သည် Vision Legacy စီးပွားရေးအား စတင်ပါရန် လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါသည်။ “ကွန်ယက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်” များသည် ကွန်ယက်စီးပွားရေး၏ ပိုင်ရှင်အစစ်အမှန်ပင် ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ မှတ်ယူထားရှိပါသည်။
Mission စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအား ခိုင်မာ တည်မြဲမှုရှိစေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့မှ စည်းကမ်းနှင့် လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များကို တင်းကျပ်စွာ သတ်မှတ်ထား ရှိသည့်အပြင် ဆန်းသစ်သောနည်းပညာဖြင့်ဖော်စပ် ထုတ်လုပ်ထား သောထုတ်ကုန် များအားဖြင့် လူနေမှုစနစ်အား တိုးတက် ပြောင်းလဲစေနိုင်ပါသည်။
Commitment တင်ပြမှုနှင့်တောင်းဆိုချက်များအားအမြဲလက်ခံဖြေရှင်း ပေးခြင်းဖြင့် တိုးတက်
ကွန်ယက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ သမိုင်းသစ်ဖြစ်သည့် Legacy စီးပွားရေးအား စတင်ပါရန် လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါသည်။
FOOD SUPPLEMENT	ဘဝလမ်းကြောင်းအတွင်း လျှောက်လှမ်း နေမှုတွင် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ခြင်းသည် အတူယှဉ်တွဲလျှောက်လှမ်းနေရ မည်ဖြစ်သည်။ ကျန်းမာရေးသည် ဘဝတွင် အရေးကြီးသည့် နေရာ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်နေသည့် အတွက် ကျန်းမာရေးအား ဂရုစိုက်ခြင်းဖြင့် အနာဂတ်တွင် အောင်မြင်မှု ရရှိစေရန်မှာ ခက်ခဲမှုမရှိ်စေပါ။ ထို့အတွက်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အာဟာရဖြည့်စွက်စာများအား ကောင်းသည်ဆိုရုံမဟုတ်ပဲ အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန် ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ဘေးထွက်ဆိုးကျိူးများမှ ကင်းဝေး စေရန်နှင့် ပြည့်ဝသော အာဟာရ များရရှိစေရန်အတွက်တိကျ မှန်ကန်သောနည်းစနစ်များဖြင့် ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
အရည်အသွေး ပြည့်ဝသော ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ သုံးစွဲခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်ရာ ဘဝလမ်းကြောင်း ပေါ်တွင်ကျန်းမာသန်စွမ်းစွာ နေထိုင်သွားလာလှုပ်ရှားနိုင်ပါ သည်။
SKINCARE	အန္တရယ်ကင်း ဘေးရှင်းခြင်း သည်လည်း ဘဝတွင် အရေးပါသည့် အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့မှ အရည်သွေးမြင့်မား၍ ဘေးကင်းသော ထုတ်ကုန် များကိုသာ အရေပြားထိန်းသိမ်း ပြုပြင်ခြင်း အတွက် ထုတ်လုပ်ထား ရှိပါသည်။
သဘာဝမှ ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထား သည့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများသာ ဖြစ်သောကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချ စွာဖြင့်သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ ခန္ဓာကိုယ်အားဆိုးကျိုးမဖြစ်စေပဲ ကျန်းမာလှပသည့် အသားအရေနှင့် အတူ ရှုမောဖွယ် အဆင်းသဏ္ဍာန်အား ပိုင်ဆိုင် ရရှိ်စေပါသည်။
HOUSEHOLD PRODUCT	ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုသည် ကျန်းမာရေး အတွက် တိုက်ရိုက် ဆိုးကျိုးပေးနေသည့် အရာပင် ဖြစ်သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့မှ အိမ်သုံး ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည့် ဆပ်ပြာမှုန့် အား ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ဆိုးကျိုး မဖြစ်စေရန်ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားရှိ ပါသည်။
ပန်းကန်ဆေးဆပ်ပြာရည် အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာရည် အထွေထွေသန့်စင်ဆေးရည် များတို့ကို ပတ်ဝန်းကျင်အား ဘေးအန္တရယ်မရှိ စေရန်အတွက် သဘာဝကုန်ပစ္စည်းများ မှဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထာားခဲ့ပါ သည်။ သင်နှင့်အတူ သင့်မိသားစုပါ မကျန် သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အရာများအတွက်ပါ နာရီစက္ကန့်တိုင်းတွင် အထူး ဂရုစိုက်ပေး နေမည်ဖြစ်သည်။
LIFESTYLE	အများနှင့်မတူသည့် ထူးခြားကောင်းမွန်သော ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအပြင် Legacy မှအခြားသော ဝန်ဆောင်မှုများလည်းရှိပါသည်။ သင်၏ ဘဝလမ်းကြောင်းတွင် စစ်မှန်ပြည့်စုံ သောဘဝအား ခံစားရရှိ နိုင်ရန်အတွက် အထူးအစီအစဉ်အဖြစ် ကောင်းမွန်သည့် ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် “အထူးအခွင့်အရေး” ဟုခေါ်ဆိုနိုင်သည့် အစီစဉ်ကို စီးပွားလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသူ အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေ လွယ်ကူမှုရှိစေရန် ပြင်ဆင်ထားရှိပါသည်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ စိတ်ကျေနပ်မှု နှင့်မိသားစုများ အတွက် လူနေမှုဘဝ မြင့်မားရေးနှင့်ပြည့်စုံခြင်းအား ရရှိစေလိုပါသည်။
NEVER START A BUSINESS JUST TO MAKE MONEY.
START A BUSINESS TO BUILD A LEGACY.
Copyright 2015 LEGACY CORP | All Rights Reserved